Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): September 2015
KIO's representatives and Kachin Alliance's Gum San visited the White House today
at 9/29/2015 08:40:00 AM
KIO's representatives and Kachin Alliance's Gum San visited the White House today to update US leaders and officials on current peace process. Deputy head of KIO's foreign department Col La Aung also met with Assistant Secretary Malinowski at the State Department.
at 9/29/2015 08:29:00 AM
Mungdan Lu Mayu ai amyu Rai Yang Wunpawng Party kaw Bang Ga! Kaga Myu hte rau jawm Nga mayu yang Kaga Party hte Matut ai Party kaw Bang ga! 2015 November election gaw Wunpawng Myu Sha Yawng hpa ra sharawng ai hpe chye lu na aten rai na re. Wunpawng Ginra hta Maigan wa hpe sa up hkang shangun na kun???Wunpawng Amyu sha up hkang na kun??Mung shawa masha ni daw dan na aten Rai sai.
at 9/29/2015 08:07:00 AM
Photo by: Gum San NSang
at 9/26/2015 10:29:00 AM
KIO leaders and local education committee officials on Friday officially opened Maija Yang College in KIO-controlled city located in Burma-China border. Maj. General Sumlut Gun Maw, KIA’s deputy chief of staff, cut the ribbon during the opening ceremony. KIO central committee members, KIA’s 3rd Brigade Commander Col. Maran Tawng La, Director of Maija Yang College Sara Kum Shawng, Principle of Institute of Education Dr. Lahpai Hkun Seng, local religious leaders and hundreds of Maija Yang residents attended Friday’s opening ceremony.
Maija Yang College was founded as the need arise for the students in KIO-controlled area. Students who passed the matriculation exam in KIO-controlled area have been banned from continuing further education in Burmese government controlled cities since the renewed war began in June 2011.
Another college in Maija Yang, Maija Yang Institute of Education (Maija Yang Amyusha Hpaji Dakkasu), was established in Sept 2004 with the support of KIO’s Education Department. The process of becoming Maija Yang Institute of Education has been long since it started asaTeacher Training School in 1997. The School was later named Maija Yang Teacher Training College in 2008 and subsequently Maija Yang Institute of Education in 2014 focusing on training new school teachers.
Maija Yang Institute of Education is currently offeringanumber of courses including Pre-College program, Diploma in Education, Diploma in English and Postgraduate diploma in Education. Currently, over 200 students from Kachin and Shan State have enrolled in different programs offered at Maija Yang Institute of Education.
Update: Some information has been amended. Earlier version of this story indicated Maija Yang College as the same as Maija Yang Institute of Education.
ဖက်ဒရယ်ဆိုတာ သံယံဇာတဆက်ကြေး ထပ်ကောက်မဲ့ နိုင်ငံရေးစကားလုံးပါ
at 9/21/2015 10:13:00 AM
ရခိုင်ပြည်နယ် အကျယ်အ၀န်း က ၃၆၇၆၂ စတုရန်းမိုင်ရှိတယ်
၂၀၀၂ ခုနှစ်မှာ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံက ခွဲထွက်လာတဲ့ အရှေ့ တိမောက ၁၅၄၁၀ စတုရန်မိုင်ဘဲရှိတယ်၊ လက်ရှိ ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ တ၀က်ဘဲရှိတယ်လို့ ယူဆလို့ ရတယ်။
ငါတို့ အားလုံးကျွန်သွားခံနေတဲ့စင်ကာပူ အကျယ်အ၀န်းက ၆၉၃ စတုရန်းမိုင်ဘဲရှိတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ကျွန်းတစ်ကျွန်းစာဘဲရှိတယ်။
ရခိုင်လူမျိုးတွေ ၊ပညာတတ်အများကြီးရှိတယ်၊ ခင်ဗျားတို့ သီးခြား နိုင်ငံထူထောင်နိုင်တဲ့ နေ့ ဟာ မြန်မာပြည် အာဏာရှင်ကျဆုံးတဲ့ နေ့ ဘဲ။ ဒီမိုကရေစီစနစ် စတင်အသက်ဝင်တဲ့ နေ့ ဘဲ့ ။ခင်ဗျားတို့ စည်းလုံးပါ။ခင်ဗျား တို့ စည်းလုံးညီညွတ်ခြင်းအားဖြင့်မြန်မာ တနိုင်ငံလုံးကပြည်သူတွေကိုကူညီပါ။ လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ ကုလားပြသနာက အာဏာရှင်တွေကစားနေတဲ့ အကွက်ပါ။
လက်ရှိ ကချင်နဲ့ ရှမ်းဒေသတွေက တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ မူဝါဒအရခွဲထွက်ဘို့ မလွယ်ပါဘူး၊လူမျိုးစုတွေအားလုံးက တရုတ်နိုင်ငံမှာလဲကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဒေသတွေကိုယ်စီနဲ့ မို့သူနိုင်ငံကိုကူးစက်လာမှာကို ကာကွယ်တဲ့ အနေနဲ့ မွေမသေတုတ်မကျိုး မူဝါဒကိုဆွဲကိုင်ထားလို့ ပါ။
ရခိုင်နိုင်ငံသီးခြား ပေါ်ထွက်လာဘို့ အတွက် နိုင်ငံသားတိုင်းရဲ့ တာဝန်ပါ၊ လူမျိုးတိုင်းက ၀ိုင်းဝန်း တည်ဆောက်ပေးဘို့ လိုပါတယ်။လက်ရှိပထ၀ီအနေအထားအရ နိုင်ငံကြီးတွေအတွက်သာ မဟာဗျူဟာကျတာမဟုတ်ဘဲ စစ်အာဏာ ရှင်တွေအတွက်လဲ မဟာအကျိုးစီးပွားဖြစ်သလို ဒီမိုကရေစီ လိုလားသူ နိုင်ငံသားအားလုံးအတွင်လဲ မဟာဗျူဟာကျတဲ့ ဒေသဖြစ်နေပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာ အတိတ်က စစ်ဘုရင်တွေ ရဲ့ ဆိုးမွေတစ်ခုပါ၊ ဒီဆိုးမွေကိုမစွန့် လွှတ်နိုင်ဘဲ ဗမာစစ်အာဏာရှင်မပြိုလဲပါ။ဒါကြောင့် ကြည်ဖြူစွာစွန့် လွှတ်နိုင်ဘို့နိုင်ငံသား
အားလုံးကြိုးစားမှရပါမယ်။ လူမျိုးမတူ ယဉ်ကျေးမှုမတူတဲ့ ဒေသက အကျိုးစီးပွား တွေကို ဂုတ်သွေးစုတ်နေတာကိုထိုင်ကြည့် နေနိုင်တဲ့လူမျိုးတွေ ရှိနေတာကြေ့ာင့် အာဏာရှင်အမြစ်တွယ်နေတာကိုလက်ခံရပါမယ်။ပြည်ထောင်စု လောဘတွေကြောင့်ဖက်ဒရယ်ကိုထပ်မံအသက်သွင်းဘို့ ကြိုးစားနေကြတာကို သတိပြုရမယ်။ဖက်ဒရယ်ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး ဗမာ လူမျိုးတွေရဲ့ သံယံဇာတ ဆက်ကြေးကောက်ဘို့ကြိုးစားမှုကို သတိထားဘို့ လိုပါတယ်။
ဖက်ဒရယ်ဆိုတိုင်း ကောင်းသော စနစ်မဟုတ်တာကို လေ့လာမှရပါမယ်။
at 9/20/2015 06:58:00 PM
Opinion/Analysis September 20, 2015 Dr. Khin Zaw Win
A surprising sequel to the midnight coup of 12 August that removed Union Speaker Shwe Man from the USDP chairmanship wasawholesale reassignment of mid-ranking and senior military officers to state and party posts. A number of them will also be running for elections. It is likely that this was part ofa‘package’ rather thanaconsequence of that coup. The total number of officers is said to be around 200, with ranks stretching from major to lieutenant general. The posts vacated in the armed forces organizational structure have been filled and there is renewed speculation about who the next C-in-C could be. Needless to say, all this has an important bearing upon the country’s immediate and post-elections future.
Myanmar is no stranger to reshuffles and transfers to civil positions, including before the 2010 elections, but never on this scale. It is possible that the intense rivalries and divisions within the ruling establishment had precipitated this move. And there is an unwritten rule thatanew C-in-C has to be appointed five years before his retirement, and this has to coincide with the President’s term of office. The clear intention and result of the recent mass redeployment isareassertion of the military’s presence and authority in the state and political edifices (which are already heavily dominated by the military). But it is alsoastatement of unhappiness at the power struggle between the two former generals Shwe Man and Thein Sein, whose days are now numbered. It is in additionagenerational move, with new batches moving up, as happens in the armed forces.
There isacertain amount of interest, understandably, in the implications of all this. Two appointments have some significance: Air Force General Khin Aung Myint has been appointed Joint Services Coordinator, said to be the No.3 post in the armed forces hierarchy. In the past only army generals have held this post. In the second instance, the defence portfolio has been given to Lt-Gen Sein Win, said to beawell-regarded officer. Previously this post was seen as superfluous and the defence minister something ofanon-entity. In themselves these steps are too little and it is yetabit early to gauge the extent of professionalization and modernization, not to mention de-politicization. One could perhaps only say that the process has begun.
Some observers also welcome the confirmation of Gen Soe Win as Deputy C-in-C. (He had briefly been O.C. Northern Command in Myitkyina). Like Sein Win, he is said to beaprofessional soldier and ‘clean’. But this was said about Thein Sein too. A lot of people in politics talk abouta‘return to the barracks’ and about which military leader would be more favourably disposed towards democracy and democratic leaders. I think this is far too simplistic. I have said that the Myanmar armed forces have traditionally taken onadouble role (the ‘dwifungsi’ in the former Indonesian military) but had not succeeded in either sphere. The present imperceptible movement could be an indication that the Myanmar generals present and former have realized this (without admitting it) and are concentrating on rebuilding military capabilities per se. For this to happen smoothly they have taken on multiple layers of protection – the USDP (and allied parties), the government executive,achunk of Parliament and various intellectuals. The Thein Sein ‘reforms’ have hooked many from the international community and brought in accolades and resources, as well as an important rethink of relations with the Myanmar military. I would say that in this first term, the military has done quite well in that regard – at least in the physical or hardware part. But domestically it isadifferent story – continued hostilities, delayed ceasefire process, obstructing the constitutional amendments and heightened unpopularity. Concomitant with the wholesale military transfers has been the strong emergence of colour ribbons movements against militarization of government ministries.
For the military’s corporate makeover to continue, the protective canopy has to be maintained and strengthened. It is also dependent on Myanmar’s democratic transition making progress. It has to be mentioned that all this does not discount future scenarios where the military has to answer for war crimes and gross human rights abuses. With regard to the Nation-wide Ceasefire Agreement, the military leadership may be uncertain about its merits and possible drawbacks. But Thein Sein needs the NCA desperately, and the present promotion campaign is aimed at the military audience too.
The Myanmar military has made its move and is preparing for the next phase, which will follow the elections and the possibly partial NCA. In full awareness of the national nature of these and other undertakings, all other stakeholders should be equally prepared too.
The author, Dr. Khin Zaw Win, is director and founder of the Tampadipa Institute in Yangon.
at 9/20/2015 06:41:00 PM
Khin Maungooto‎U Ravika
ယနေ့ MPC တွင် မည်မျှပင် အာရွီးနေစေကာမူ ယနေ့... မိုင်းခေါင်ကျေးရွာသို့ ဒုက္ခသည် အသစ်များ ခိုဝင်လာနေသည်။ အရပ်ဖက် လူထုများ ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်နေရသည်။
ယခုအချိန်တွင် ဗန်းမော်ခရိုင် မန်စီမြို့နယ်တွင် မြန်မာ့တပ်မတော်၏ ထိုးစစ်ဆင်မှုကြောင့် ကြားညှပ်နေသော ကျေးရွာသားများအား အရပ်ဖက် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများမှ ကယ်ထုတ်နေပါသည်။ လူဉ်ီးရေ ၁၂၀ ခန့် ကယ်ထုတ်ပြီး မိုင်းခေါင် ကျေးရွာသို့ ခေါ်ဆောင် လာထားပြီ။နောက်ထပ် ၄၀၀ ခန့် ကျန်နေဆဲဖြစ်သည်။
အင်န်စီအေသည် တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ်ဖြစ်သည့်အား လျော်စွာ တစ်နိုင်ငံလုံး လွှမ်းခြုံနိုင်သောစာချုပ်ဖြစ်ရန် ပဓာနကျ သည်။ တိုင်းရင်းသား လက်နက် ကိုင်အဖွဲ့များအားလုံး ပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးသည့် အင်န်စီအေသည်သာ နှစ်ပေါင်း ၆၀...
ကျုပ်တို့ ရှင်းရှင်းပဲ ပြောမယ် တိုင်းရင်းသားတို့ရဲ့ ရန်သူဟာ မဟာဗမာ့ဝါဒီ စစ်တပ်၊ ဖွတ်နဲ့ မဘသတို့ပါပဲ။
at 9/20/2015 06:40:00 PM
ကျုပ်တို့ ရှင်းရှင်းပဲ ပြောမယ်။ တိုင်းရင်းသားတို့ရဲ့ ရန်သူဟာ မွတ်တွေလည်း မဟုတ်ဘူး။ ခရစ်ယာန်တွေလည်း မဟုတ်ဘူး။ NLD လည်း မဟုတ်ဘူး။ ကျုပ်တို့ရဲ့ ရန်သူဟာ မဟာဗမာ့ဝါဒီ စစ်တပ်၊ ဖွတ်နဲ့ မဘသတို့ပါပဲ။
မရှင်းရင် နောက်တစ်ခေါက် ပြန်ဖတ်။
မဟာဗမာ့ဝါဒီ စစ်တပ်၊ ဖွတ်နဲ့ မဘသတို့ပါပဲ။
at 9/20/2015 06:38:00 PM
မွန်ပြည်နယ်ရှိ မွတ်စလင်တွေကို မွန်အစိုးရက မှတ်ပုံတင် ထုတ်ပေးခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး။ မြန်မာအစိုးရကသာ ထုတ်ပေးခဲ့တာ ဖြစ်တယ်။ ကျိုက်မရောဘက်မှာ မွတ်စလင်ရွာတွေ တိုးလာတာဟာ မွန်တို့ရဲ့ တာဝန်မဟုတ်ဘူး။ စစ်အစိုးရနဲ့ အခု ဖွတ်တို့ရဲ့ တာဝန်ပဲ။ သူတို့လုပ်ပေးခဲ့တာ ဖြစ်တယ်။ တကယ်လို့ မွတ်စလင်တွေက မကောင်းဘူးဆိုခဲ့ရင် မြန်မာအစိုးရက ရှင်းလိုက်ဖို့ပါပဲ။ ပြီးရင် မိမိတို့လုပ်ရပ်မှားယွင်းကြောင်း ဝန်ခံကြပေါ့။
မိမိအနေနဲ့ ပြောရရင် နိုင်ငံသားဖြစ်နေသူများနဲ့ အငြင်းအခုံ မလုပ်ချင်ဘူး။ ဒုတိယနိုင်ငံသားလည်း မရှိစေချင်ဘူး။ မွန်ပြည်နယ်မှာ မွန်ပြည်နယ်မှတ်ပုံတင်ကိုင်ဆောင်သူတိုင်းဟာ အဆင့်တူလို့ သတ်မှတ်ရမှာ ဖြစ်တယ်။ မိမိအမြဲတမ်း ပြောတယ်။ မွန်ပြည်နယ်မှာ မွန်အစိုးရက စီးပွားရေးကို အကြီးအကျယ်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူး။ စီးပွားရေးအခွင့်အရေးတွေကိုပဲ ဖန်တီးပေးရမှာ ဖြစ်တယ်။ ဘယ်လူမျိုးမဆို၊ ဘယ်ဘာသာဝင်မဆို စီးပွားရေးကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် လုပ်တတ်ရင် ဝမ်းသာတယ်။ အဲဒီစီ်းပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကနေ အခွန်ရပြီး မွန်ပြည်နယ်တိုးတက်ရေးကို ဆောင်ရွက်နိုင်လို့ပါပဲ။ မွတ်စလင်တွေက မွန်တွေထက် လုပ်တတ်ရင် ပိတ်ပင်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။
ဒီတော့ မွန်ပြည်နယ်သားအားလုံးဟာ မွန်ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအောက်မှာ နေထိုင်ခဲ့ရင် အားလုံးက ဘေးကင်းလုံခြုံပြီသား ဖြစ်တယ်။ အမျိုးသားရေးကို အကြောင်းပြပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်းကို ဖျက်ရင် ဖျက်သူကို အရေးယူမှာပဲ။ ဗလီကို ဖျက်ရင်လည်း ဖျက်သူကို အရေးယူမှာပဲ။ ခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကို ဖျက်ခဲ့ရင်လည်း အရေးယူမှာပဲ။ အစိုးရအဆောက်အအုံတွေကို ဖျက်ခဲ့ရင်လည်း အရေးယူမှာပဲ။ ပြည်သူတို့ချွေးနှဲစာ၊ ပြည်သူတို့အခွန်နဲ့ ဆောက်ထားသမျှဟာ ပြည်သူတို့အားလုံး ပိုင်ကြတယ်။ ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေကို ဖျက်ဆီးသူဟာ ဖွဲ့စည်းပုံကို ချိုးဖောက်သူ ဖြစ်လို့ ထောင်နန်းစံရမှာ ဖြစ်တယ်။
ဒီတော့ ဘယ်သူမဆို မွန်ပြည်နယ်မှာ နေတယ်၊ မွန်ပြည်နယ်အကျိုးကို ဆောင်ရွက်ချင်တယ်ဆိုရင် ကိုယ့်မှာ ရှိတဲ့ ပညာနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တိုးတက်အောင် ပြုစုပျိုးထောင်ပါလေ။ မွန်ပြည်နယ်သားတွေရဲ့ တစ်ဦးချင်းတိုးတက်မှုဟာ မွန်ပြည်နယ်အတွက် အင်အားဖြစ်စေမဲ့အကြောင်းပါပဲ။ မွန်ပြည်နယ်သားတိုင်းက ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု ရှိစေရမယ်။ မွန်လား၊ ဗမာလား၊ ထားဝယ်လား၊ ကရင်လား၊ ပအိုဝ်းလား၊ ကုလားလား၊ တရုတ်လား ဘယ်သူကမှ မျက်နှာမငယ်စေရဘူး။ မွန်ပြည်နယ်သားများအဖြစ် ဂုဏ်ယူလို့ ရတယ်။ ဒါဟာ မိမိသဘောထားပါပဲ။ တိုင်းပြည်မှာ ရန်ဖြစ်နေခဲ့တာ နှစ်ပေါင်းထောင်ချီရှိခဲ့ပြီ။ ညီညွတ်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီ။ ဒီတော့ မွန်ပြည်နယ်အကျိုးကို လိုလားသူတိုင်း မွန်ပြည်နယ်ကို အဓိကရုဏ်းတွေ သယ်မလာပါနဲ့။ နည်းပညာတွေ၊ အသိပညာတွေ၊ ဘဏ္ဍာငွေတွေ၊ အခွင့်အလမ်းတွေကိုပဲ သယ်လာစေချင်ပါတယ်။
ရာမညတိုင်းက သုနာပရန္တတိုင်း(မြန်မာပြည်)လက်အောက်ကို ကျရောက်သွားတော့ အင်္ဂလိပ်တို့က မွန်တွေဆီ ရောက်လာပြီး မြန်မာတို့ကို ကူတိုက်ပေးမဲ့အကြောင်း ပြောတယ်။ မွန်တို့က ＂မိမိတို့မှာ လူအင်အား ရှိတဲ့အကြောင်း၊ အမှန်တကယ် ကူညီချင်ရင် လက်နက်သာ တပ်ဆင်ပေးစေလိုကြောင်း＂အကြောင်းပြန်လိုက်တယ်။ ဒီက စပြီး မွန်နဲ့ အင်္ဂလိပ်ဆက်ဆံရေး မကောင်းဘဲ မွန်နေရာမှာ ကရင်အစား ဝင်ခဲ့ဖူးတယ်။
အခုလည်း မဘသတို့က မွန်ပြည်နယ်သေးသေးလေးကို ရောက်လာပြီး အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာအတွက် အောင်ပွဲခံလိုက်ကြတယ်။ မွန်ပြည်နယ်ကို ကုလားတွေလက်ထဲမရောက်အောင် ကူညီပေးပါမဲ့အကြောင်း ပြောတယ်။ မွန်တွေကို ကူညီချင်ရင် အညာက ဘုန်းကြီးတွေကိုပဲ မွန်ပြည်နယ်ထဲ လှိမ့်မပို့ပါနဲ့။ မွန်ဘုန်းကြီးတွေ များအောင် ဝိုင်းဝန်းပေးပါ။ မွန်တွေမှာ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ရအောင် တိုက်ပွဲဝင်ပေးပါ။ မွန်အမျိုးသားကျောင်းတွေမှာ ဘဏ္ဍာငွေ ပြတ်တောက်နေပါတယ်။ အလှူခံပြီး ထည့်ဝင်ပေးကြပါ။ မန္တလေးက ဘုန်းကြီးတွေ မလုပ်ပေးနိုင်ရင် မွန်စကားကိုတောင် မတတ်တဲ့ မဘသမွန်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးစ နှစ်ပါးစက လုပ်ပေးကြပါ။
မွန်ပြည်နယ်က ကုလားလက်ထဲမပါစေချင်ရင် မွန်တွေမှာ အင်အားရှိနေဖို့ လိုတယ်ဆိုတာ ပြောနေစရာတောင် မလိုဘူးလေ။ စစ်အစိုးရအဆက်ဆက်က မွန်တွေကို ကုလားလောက်တောင် နေရာမပေးခဲ့ပါ။ မွန်ပြည်နယ်သားတွေက ကုလားတွေနဲ့ အမှုဖြစ်ရင် ရှုံးမြဲပါပဲ။ အခုလည်း နိုင်မယ်လို့ မထင်ပါ။ မွန်တွေက ကိုယ့်ပြည်နယ်မှာ နေရင်းနဲ့ မွန်မဟုတ်တဲ့လူမျိုးတိုင်းကို ကြောက်နေခဲ့ရတဲ့ဘဝပါ။ ဒါဟာ အစိုးရအဆက်ဆက်က မွန်တွေကို ချိုးနှိမ်ခဲ့ကြောင်း အထူးပြောစရာမလိုတော့ပါ။ အခု ဦးဝီရသူတို့က အဲဒီအစိုးရကို မဲပေးကြပါလို့ တိုက်တွန်းနေပါတယ်။ မွန်လူမျိုးအပေါင်းတို့က ဒီဘုန်းကြီးကို အားပေးသင့်သလား၊ သူ ညွန်တဲ့ ဖွတ်တွေကို မဲပေးသင့်သလားဆိုတာ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲ ဆုံးဖြတ်ကြပေါ့။
at 9/10/2015 10:13:00 AM
၀ ကတော့ ဒီသမဒ သက်တမ်းမှာ တိုက်ပွဲမဖြစ်လို့ ငြိမ်းချမ်းနေလို့ NCA မှာ လက်မှတ်ထိုးစရာ မလိုဘူး၊ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှာတော့ ပါမယ် လို့ ပြောထားတယ်။ အိမ်နီးချင်း တရုတ်နဲ့လည်း တဲ့အောင် ပေါင်းရပါတယ် ဆိုတဲ့ နေရာမှာတော့ ဘကြီးအောင်နဲ့ တူပြီး "ငြိမ်းချမ်းအောင်လည်း အစဉ်တစိုက် လုပ်ပါတယ်" ဆိုတဲ့ အပိုင်းကျတော့ "ဘယ်လို လုပ်တာလဲ" လို့ မေးလည်း မေးချင်တယ်။ မေးလည်း မမေးရဲဘူး။
အစကတဲက မြန်မာ့တပ်မတော်က လက်နက်၊ လူ၊ ငွေ အင်အားတောင့်တင်းတဲ့ ၀ ကို ရန်မစဘူး။ ၂ ပတ်လောက်နဲ့ လက်နက်ချနိုင်တယ် လို့ ယူဆခဲ့တဲ့ အဖွဲ့တွေကိုဘဲ တိုက်ခိုက်တာမို့ အင်အားကြီးရင် ငြိမ်းချမ်းနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ သီအိုရီလေး ထုတ်လို့ရမယ်။ အင်အားငယ်တဲ့ Minorities တွေကိုတော့ အသိအမှတ်ပြုမှုတောင်မရှိ။
၀ က NCA မှာ မပါတော့ NCA မှာ ရေးသားထားတဲ့ အချက်တွေကို လိုက်နာစရာ မလိုဘဲ နေမြဲအတိုင်း နေလို့ ရတာပေါ့။
နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ မတိုင်ခင် ပြည်နယ်လေးပါ ကြိုတောင်းထားသေး။
NCA မှာ လက်မှတ်ထိုးစရာ မလိုဘူး
Robert Sann Aung ဦးတူးဂျာ နှင့် အတူဖမ်းခံရပြီး ၂၈ သြဂုတ်လ ၂၀၁၅ နေ့ကပြန် လွတ်လာသော ကာမိုင်းမြို့ ဇီးကျွန်းရပ်ကွက်သား ကိုသန်းလွင် ၏ပြောပြချက် ။
at 9/10/2015 09:56:00 AM
ဦးတူးဂျာ နှင့် အတူဖမ်းခံရပြီး ၂၈ သြဂုတ်လ ၂၀၁၅ နေ့ကပြန်လွတ်လာသော ကာမိုင်းမြို့ ဇီးကျွန်းရပ်ကွက်သား ကိုသန်းလွင်၏ပြောပြချက် ။
Posted by Robert Sann Aung on Sunday, September 6, 2015